AUKEY LC-Q6 10W Graphite Wireless Charger Pad – Gadget Pro Myanmar
Product SKU: AUKEY LC-Q6
This product is now on 50% clearance sale. Product is NEW. Reason for clearance is to clear out the last few stock. WARRANTY is3Months.
50% လျော့စျေးဖြင့် ဂိုဒေါင်ရှင်းရောင်းရန် သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ဂိုဒေါင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာမှ ထွက်လာသော အနည်းငယ်သော ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ဂိုဒေါင်ရှင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ အာမခံ (၃)လ ပါဝင်သည်။
ကိုယ့်စားပွဲပေါ်မှာ အားသွင်းကြိုးတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတာမျိုး၊ ထိုးထိုးထောင်ထောင် wireless charger မျိုးတွေ မျက်စိနောက်တာမျိုး၊ wireless charger တော့ ဖြစ်ပါရဲ့၊ ဖုန်းလောက်နီးပါး အပြားကြီးလွန်းတော့ စားပွဲနေရာ အရမ်းပုပ်တာမျိုးတွေ ကို မကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက် အင်မတန် သင့်လျော်မယ့် wireless charger လေးပါ။
Graphite အသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး၊ premium looking ဖြစ်တာကြောင့် သင့်စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း အင်မတန် အမြင်တင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Red Dot ရဲ့ IF Design Award ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
10 Watt ထိ အားသွင်းနိုင်တာကြောင့် APPLE ရဲ့7Watt Wireless Fast Charging အထိ ကောင်းကောင်း support လုပ်တာကြောင့် iPhone တွေကိုလည်း ကြိုးမဲ့ အမြန် အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား wireless charging support လုပ်တဲ့ ဖုန်း တော်တော်များများကိုလည်း အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းကာဗာ အထူ 3mm အထိ ဖောက်ပြီး အားသွင်းနိုင်တဲ့အတွက် အားသွင်းချိန်မှာ ဖုန်းကာဗာ ဖြုတ်စရာမလိုပဲ အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Broad Compatibility: Works with all Qi-enabled devices including iPhones, and other wireless charging enabled devices even through most cases (thickness less than 3mm/0.12”).
Safety Features: Temperature control, foreign object detection, power input monitoring, and more ensure safe & reliable operation.